नेकपा फुट्दा देश ब,र्बाद हुदैन, सरकार ढल्यो भने अर्को बन्छ : सुरेन्द्र पाण्डे
November 20, 2020 adminLeaveaComment on नेकपा फुट्दा देश ब,र्बाद हुदैन, सरकार ढल्यो भने अर्को बन्छ : सुरेन्द्र पाण्डे
काठमाडौ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ग`म्भीर संकटको मोडमा पुगेको सोही पार्टीकै महासचिव विष्णु पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा भनिसकेका छन् । दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बढेको दूरी पार्टी विभाजनसम्मै पुग्ने हो कि भन्ने चि`न्ता नेकपाभित्र देखिन्छ ।
विभाजनको ख`तराबाट टरेको आँकलन गरिएको नेकपा दुई महिना नपुग्दै फेरि सं`कटतिर धकेलिनुको कारणबारे कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेसँग अनलाइनखबरले बुझ्ने प्रयास गर्‍यो । स्पष्ट वक्ताका रुपमा परि`चित नेता पाण्डेले नेकपा फुट्दैमा देश बर्बाद नहुने र यो सरकार ढल्यो भने यसको ठाउँमा अर्को आउने बताए । तर, पार्टी फुट्यो भने नेकपा चाहिँ सकिने उनले बताए ।
उनले थपे, ‘अहिलेको पुँजीवाद भनेको डाटा पुँजीवाद हो ।’पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले मार्क्सका पालाको ‘औद्योगिक पुँजीवाद’, बीसौं शताब्दीको ‘वित्तीय पुँजीवाद’ र अहिलेको ‘डाटा पुँजीवाद’बारे ‘अप्राशंगिक कथन’ यसरी सुनाए –
कार्ल मार्क्सले कमोडिटी इकोनोमीको लामो व्याख्या गरे र श्रमिकको श्रमबाट अतिरिक्त अंश निकाल्दै पुँजीपति वर्गको उदय हुने कुरा निष्कर्ष निकाले । उत्पादनमा मजदुर सहभागी हुने, तर वितरण पुँजीपतिमा मात्रै हुने भएकाले धनी झनै धनी र गरीब झनै गरीब हुने भए । पुँजीवादको मुख्य चरित्र यही नै हो । तर, २० औं शताब्दीमा आएपछि भने साम्राज्यवादको च`रण सुरु भयो । उपनिवेश लागू हुन थाल्यो । कुनै देशमा पैसा लिएर जाने, अनि त्यही देशको कच्चा पदार्थबाट त्यही देशका मजदुरमार्फत् वस्तु उत्पादन गर्ने र त्यही बेचेपछि पैसा बोकेर फर्कने । त्यो बेलाको पुँजीवादको मुख्य च`रित्र वित्तीय पुँजीवाद थियो ।
सन् १९६० मा कम्युटरको विकास भयो । कम्युटरबाट सूचना ट्रान्सफर हुन थाल्यो । सन् १९९० तिर पुग्दा वर्ल्ड वाइड वेव (डब्लुडब्लुडब्लु) को विकास भयो । बिग डाटा सेन्टरहरु निर्माण हुन थाल्यो । त्यसलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजिन्सको माध्यमबाट विश्लेषण गर्ने र संभावनाहरु बारे निष्कर्ष निकाल्न थालियो । अहिले ठूला देशहरुले ब्यापक मात्रामा व्यक्तिगत सूचना (डाटा) हरु संकलन गरिरहेको छ ।
त्यो सूचना आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको माध्यमबाट विश्लेषण हुन्छ । संक`लित मानव व्यवहारको सूचना आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको माध्यमबाट विश्लेषण गरेर प्रेडिक्टिभिट प्रोडक्ट (….) निर्माण गरिन्छ । अर्थात्, डाटाचाहिँ कच्चा पदार्थ भयो । यो नै अहिलेको शताब्दीको पुँजीवादको च`रित्र हो । हिजो श्रमबाट हुने काम अब डाटाहरुबाट हुने गर्छ ।
त्यसैले, अहिलेको पुँजीवाद डाटा पुँजीवाद हो । यो चरि`त्र बुझिएन भने पुरानो व्याख्या गरेर बनाइने योजनाले काम गर्दैन । पुरानो पुँजीवादको च`रित्र बाटो बनाउने, रेल बनाउने, ठूला बिल्डिङ बनाउने थियो । हामी त्यही अ`ल्मलिरहेका छौं । आज अमेरिका र चीनबीच कसले बढी सूचना संकलन गर्ने र को शक्तिशाली हुने प्रति`स्पर्धा भइरहेको छ ।’ न्युज पर्दा बाट
बैतडीमा ११ गाईकाे ह`त्या गरी वनमा फा`लियाे!
चोखो मनले सङ्कटा देबिको दर्शन गदै ,आज वि.सं.२०७७ साल मंसिर ०६ गते शनिबारको राशिफल पढ्नुहोस भेटी स्व्र्‍उप एक सेयर गर्नुहोस